Jürgen Klopp oo ka hadlay sababta uusan wali Fabinho kaga soo muuqan kulamada Premier League – Gool FM
Jürgen Klopp oo ka hadlay sababta uusan wali Fabinho kaga soo muuqan kulamada Premier League
(Liverpool) 25 agoosto 2018. Macalinka reer Germany iyo kooxda Liverpool Jürgen Klopp ayaa ka hadlay sirta ka dambeysa inuu seego xidiga reer Brazil ee Fabinho kulamada horyaalka Premier League, kadib imaatinkiisa garoonka Anfeld.
Laacibka reer Brazil ee Fabinho ayaa wuxuu ka maqnaa labadii kulan ay kooxda Liverpool kasoo ciyaartay horyaalka Premier League xili ciyaareedka cusub, kuwaasoo ay guulal muhiim ah kasoo gaartay West Ham iyo Crystal Palace.
Jürgen Klopp ayaa sheegay in wax walba ay ku xiran yihiin fahamka ciyaartoyda, si uu ula qabsado kooxda iyo booska uu ka ciyaaro.
“Waxay ku xiran tahay fahamka xidig kasta ee boosaska ay ka ciyaarayaan iyo ciyaartoydooda la heli karo”.
“Fabinho waa ciyaar yahan wanaagsan, waxaan wax walba kala socdaa tababarka kooxda, way adag tahay inaad ciyaarto kubada cagta ee ka duwan qaabkii hore”.
“Laakiin dhab ahaantii wuxuu sameenayaa is badal, xili sidoo kale uu qaadayo talaabooyin hormar leh”.
Shaxda rasmiga ah ee Juventus vs Lazio (Ronaldo iyo Mandzukic oo ku soo bilowday)
Arsenal oo Garaacday West Ham xili Unia Emery uu Gaaray Guushii ugu Horreeysay Horyaalka Premier League+SAWIRRO